Ukugibela ngaphandle kwezinombolo - kuwufanele yini ingozi?
Umthetho, Ukuthobela Ukulawula
Emibhokisini yabashayeli kanye nasezinkampanini, ngezinye izikhathi umbuzo uphakanyisiwe - ngingakwazi yini ukushayela ngaphandle kwezinombolo? Yini ehambisana nokuphulwa okunjalo? Iyini inani lehlawulo nokuthi ngabe ngandlela-thile ingagwenywa kanjani ezimweni ezihlukile (isibonelo, inombolo ilahlekile noma yebiwe ngqo ohambweni, noma imoto isanda kuthengwa futhi uyahamba nayo ngemuva kwezinombolo). Umshayeli ulindeni kulokhu kwenzeka uma kwenzeka umhlangano nomhloli wamaphoyisa omgwaqo? Ake sibone.
E-intanethi, eziningi zezindaba kanye nezindaba zangempela mayelana nokugibela ngaphandle kwezinombolo, inkokhelo ehlale ikhulile ngokwanele, empeleni yabonakala engeyona eyingozi kakhulu. Njengabashayeli "abakhululekile" "otmazyvavilis", okuholela "izingqinamba" ezinjenge "nje ulahlekelwe inombolo, ngilandela enye entsha" futhi ngiphume ngemali engokomfanekiso yamaruble ayikhulu noma ngisho nesixwayiso.
Isimo ngenombolo eyodwa elahlekile sasixoxwa ngokujulile. Sithi, uma senza izimangalo ngamaphoyisa omgwaqo, siphendula ngokucacile ukuthi ayikho incazelo enjalo kule khodi, asikhulumi ngezinombolo, kodwa mayelana namamaki okubhalisa, futhi sizobe sibhalisa kabusha, ngakho-ke, ngaphezu kokuhlawuliswa kwama-ruble angu-100 ongafundiwe Inombolo, ayisayivumelani. Okumangalisa ukuthi, izimpendulo ezinjalo ngezinye izikhathi "zigoqwe". Kodwa siphuthuma ukudumazeka (futhi sixwayise!) - "i-freebie" iphelile. Kusukela ngoFebruwari 2012 yiSinqumo seNkantolo Ephakeme, ukugibela inombolo eyodwa kufana nokushayela ngokuphelele ngaphandle kwezinombolo nazo zonke imiphumela elandelayo.
Ngakho-ke luhlobo luni lwesijeziso esilindele ngenxa yokuphulwa okunjalo, njengokushayela ngaphandle kwezinombolo? Ngokusho Ingxenye 2 ye- Art. I-12.2 ye-Code of Administrative Offenses of the Federation of Russian Federation ukushayela imoto ngaphandle kokubhaliswa kwamamaki noma okuhleliwe ezindaweni ezingalindelekile, noma okulukhuni ukufunda (ukuhlonza okukuthi kunzima) kujeziswa ngama-ruble ayizinkulungwane ezinhlanu. Noma ukulahlwa ilungelo lokuphatha imoto isikhathi esingangezinyanga ezi-1 kuya kwezingu-3. Okubaluleke nakakhulu ukulahlwa kwesikhashana kwelayisense yokushayela, okufana nabantu abaningi.
Izinyathelo ezinkulu, akunjalo? Ngakho ake sihlolisise ama-nuances wezwe okuthiwa "ukugibela ngaphandle kwezinombolo."
Okokuqala, khumbula ukuthi, ngokusho kwenguqulo entsha ye-Code of Offenses Offenses, izidingo zamanani okubhaliswa kombuso zimi kanje:
Ukuba khona kwabo kwangempela emotweni;
Ukufaka endaweni okuhlinzekwe lokhu (lapho kukhona uhlaka olukhethekile). Lokhu kusho ukuthi ukuthwala izinombolo nawe esitokisini noma ngaphansi kweglasi - kufana nokungafani nabo. Kusukela ekubukeni komthetho, lokhu kuhamba futhi ngaphandle kwezinombolo!
Amanani kufanele abe lula ukufunda, okungukuthi, noma yiziphi izinto zokudoba ezifakiwe. Akukho okumele ukufihle inombolo kusukela ehlokweni lomhloli. Ngakho-ke, kungcono ukususa wonke amakhethini, ama-grids noma imidwebo - konke lokhu kusebenza ngokumelene nawe.
Futhi uma ukushayela izinombolo ezingcolile kuhlukile, khona-ke noma yiziphi izimo ezingenhla ziwela esigabeni 'sokushayela ngaphandle kwezinombolo' futhi ujeziswa ngokusho komthamo womthetho. Ayaziwa ukuthi yini embi kakhulu - ukunikeza ama-5,000 noma ukulahlekelwa, okwesikhashana, kwesokudla. Kubantu abaningi esikhathini sethu, ngenxa yemibandela yempilo yasemadolobheni yanamuhla nokuhamba kwayo kanye nemikhumbi ende, ukulahlekelwa amalungelo (okungukuthi, ukuguqula ezokuthutha zomphakathi) kusho ukuphula indlela yokujwayela nokuchitha izinhlelo eziningi. Futhi othile udinga usuku nosuku ngemisebenzi yabo yobuchwepheshe. Ngakho cabanga ngokujulile, udinga izinkinga ezinjalo.
Yiqiniso, kunzima ukubona ngaphambili zonke izimo. Muva nje, enye yezingqungquthela iphakamisa umbuzo wokufaneleka kwezenzo zephoyisa elisemgwaqeni omile imoto ngaphandle kwezinombolo futhi iphoqe umshayeli. I-"chip" yukuthi umshayeli usanda ukuthola izinombolo zemoto entsha ayithenge, kodwa ayikwazanga ukukhishwa endaweni - izimbobo azihambisani nezibopho, futhi zaziyisa ekhaya ukuze zifake isikhala. Ukuzama ukuchaza lesi simo, njengokujwayelekile, akupheli lutho.
Ukuthukuthela komshayeli, ngokubona komuntu, kuyaqondakala, kodwa (alas!) Formally (okungukuthi, ngomthetho), umhloli unelungelo lokumhle - wayeshayela ngaphandle kwezinombolo! Ngokutholwa kweKhodi entsha yamathuba okuba "baphume" kulezi zimo nezimo ezifanayo cishe akushiywa. Ngakho-ke ungafuni inkathazo ekhanda lakho - ungathembeki kuleso simo noma "isici somuntu". Kungcono ukuhlela kusengaphambili zonke izinkinga ezizayo. Isibonelo, lapho uya khona izinombolo (njengalezo okushiwo ngazo), uthengise kusengaphambili bese uphonsa esihlahleni sezintaba ezikhethekile zamapuleti welayisense kanye nesethi yamathuluzi.
Ukuphumelela kuwe imigwaqo nezinkinga ezimbalwa!
Ngubani odlula ukuhlolwa kwezokwelapha lapho ecela umsebenzi?
Impesheni yaseNyakatho: imibuzo ejwayelekile ngokuvuna
Ukubhaliswa kwengane. Indlela yokwenza kahle?
Yenziwe ku-PRC. Izwe elivela kulo - China
Rossolimo-Melkersson-Rosenthal syndrome: Izimpawu, Ukwelashwa
Ukuhambelana ingonyama besilisa ukuphila insikazi Libra futhi umsebenzi
I metro station "Gorky" - yindawo enhle kwedolobha elikhulu
Kanjani igciwane ingane enterovirus
"Vintage" - njengelisho iqembu eliye baphumelele
One-time ingane izinzuzo futhi zanikezwa nolunye usizo ukuze States Abazali